Ngelixa ndenza uphando ngesihloko se intengiso, Ndenzeke kwi-infographic on Intengiso isenza njani ukuba sithenge. I-infographic engezantsi ivula ngombono wokuba iinkampani zityebile kwaye zinemfumba yemali kwaye bayayisebenzisa ukuphatha abaphulaphuli babo abahluphekileyo. Ndicinga ukuba yeyona nto iphazamisayo, ngelishwa, kunye nembono engenakwenzeka.
Uluvo lokuqala lokuba kuphela ziinkampani ezityebileyo ezibhengezayo yingcamango engaqhelekanga. Inkampani yethu ayisityebi kwaye, enyanisweni, ibineminyaka embalwa yelahleko- ukanti sasisapapasha. Intengiso, ngakumbi ngamajelo edijithali, ifikeleleka kakhulu. Ungafaka i-100 yeedola kuyo nayiphi na intlalontle okanye ukukhangela kwi-enjini yokukhangela kwiakhawunti nganye kwaye ucofe iintengiso ezijolise kakhulu ekuqhubeni ulwazi malunga neshishini lakho.
Isimo kwishishini asihambelani kakuhle nezibalo ezikhoyo kwilizwe leendaba zentlalo. Malunga Ikota yawo onke amashishini asilele Kwiminyaka emibini yokuqala ngokwezifundo ezininzi. Ngelixa Abantu bakholelwa ukuba inkampani ephakathi yenza iipesenti ezingama-36 zenzuzoUmndilili wenzuzo kwikota yakutshanje ibiyi-7.5% kwaye umda wenzuzo ophakathi ibiyi-6.5%.
Uluhlu luka-Angie, umzekelo, luqhubekile lusebenza ngelahleko ngelixa lichitha i-80 yezigidi zeedola kwintengiso- inxenye enkulu yokuya kwiintengiso zikamabonwakude ozibona rhoqo kumabonwakude. Ngelixa inkampani yoluntu inyusa ikota yengeniso ngaphezulu kwekota, akunjalo Sityebi. Ayisosisityebi kuphela, ikwangabhengezi ukwenza abathengi bazo bazive Sityebi. Uluhlu luka-Angie lubonelela ngenkonzo yokukhusela abathengi beenkonzo zasekhaya ekukhutshweni kwi-plethora yababoneleli abanomthunzi phaya.
Ukuthengisa kusebenza kumanqanaba ahlukeneyo; ayisiyonto ilula njengokuzama ukuba umntu athenge into. Kule minyaka ilishumi idlulileyo yomxholo, ukukhangela kunye nentengiso yentlalo, ndiyakholelwa ukuba iinkampani ziya zifuna ngakumbi ukuba intengiso kufuneka ibe nzulu kunokulawula ukungazithembi kwabathengi. Intengiso ekujoliswe kuyo kubathengi abafanayo nabaphulaphuli bakho yonyusa inzuzo ngokufumana kunye nokugcina abathengi abakhulu.
Kutheni usebenzisa intengiso?
Isiseko sayo yonke intengiso kukwazisa nje. Ukwazisa kunqweneleka kwiinkampani ngezizathu ezimbalwa:
Fi kelela -Ukwakha ibango lophawu lwakho, iimveliso okanye inkonzo, kuya kufuneka ukwazi ukufikelela kubaphulaphuli abatsha. Abo baphulaphuli sele bekho kwiiwebhusayithi, ukukhangela, imithombo yeendaba zentlalo, unomathotholo, umabonwakude, kunye nezinye iindlela zonxibelelwano. Ukufikelela kwabo baphulaphuli, iinkampani ezigcinise imali kwaye zabazuza zithembisa ukubhengeza.
Ukuqonda -Mhlawumbi abantu sele beyazi imveliso kunye neenkonzo zakho kodwa abanalo uluvo oluqinisekileyo malunga negama lakho. Ukulwa nembono engachanekanga yohlobo, ngamanye amaxesha kunyanzelekile (okanye kubaluleke kakhulu) ukuba iimveliso zityalomali kwintengiso.
Intengiso -Ukuqhuba ukuthengisa ngentengiso kunokusebenza, kodwa ndingakucebisa ukuba ugcine intengiso yesiko kunye neyedijithali iveki kwaye ubone ukuba ingakanani egxile kuyo isaphulelo kwaye kwiintengiso. Ngokoluvo lwam, ikukuhla. Rhoqo kunoko, sifumanisa ukuba ngelixa intengiso inokunyuswa, iinkampani ezixhomekeke kuyo ixesha elide zinokuthothisa uphawu lwazo.
Isebenza njani intengiso?
Amashishini kunye nabathengi ngokufanayo bajonge ekuphuculeni umgangatho wobomi kunye nokusebenza kweshishini labo. Ngelixa isahlulo esincinci sabantu sinokuba nokungakhuseleki kwintengiso okwenza imali kuyo, ndiyakholelwa ukuba kuncinci. Ngokoluvo lwam, uninzi lwentengiso yenethiwekhi kunye namashishini amanqanaba amanqanaba okuthengisa asebenza kule nkundla. Ngaba ukhe wamenyelwa kwesinye seziganeko? Yimibhiyozo emikhulu yabantu abonwabileyo abahamba ejikeleza inqanaba ngezithembiso zokutshekisha okukhulu, iiholide kunye neemoto ukukholisa iindwendwe ukuba zityalomali kwaye ziqale ukuzithengisela. IVemma, isiselo esinamandla se-MLM, kutshanje ukuvalwa okwethutyana njengesikimu sepiramidi.
Ngelixa oku kugqithisileyo, asiqhelekanga. Bukela intengiso eqhelekileyo ye-Apple kwaye ngekhe ubone isaphulelo kwaye ufumane ubutyebi ngokukhawuleza. Endaweni yoko, uya kujonga amabali abantu abasebenzisa ubuchule babo bangaphakathi besebenzisa izixhobo zeApple kunye nesoftware njengezixhobo. Qaphela Intengiso kaCoca-Cola Kwaye uza kubona ukugxila kwiminyhadala nakwiindawo abazithengisayo, ukuzama ukwakha ulwazi malunga nebrand apho kwenzeka khona iinkumbulo ezimnandi. Kutshanje, kuye kwafuneka basebenze ekuboneni iziselo ezinencasa kunye neengozi zempilo ezivela.
Ezinye iintengiso zisebenza kwinkuthazo yokugcina imali (izaphulelo), kodwa zininzi ezinye izizathu zokuba kutheni intengiso isebenza:
Kufuphi Ngamanye amaxesha intengiso iyimfuneko nje ukubonelela abaphulaphuli bengingqi ngento yokuba unendawo ekufutshane. Mhlawumbi ufuna i-pizza yesitayile se-NY kufutshane, kwaye ke i-pizzeria yendawo ithengisa indawo esekwe kwindawo yokukhangela okanye ekujolise kuyo umdla kwi-pizza ngaphakathi kwerediyasi ejikeleze irestyu yabo.
uxanduva -Abaninzi abathengi banika ingqwalaselo kumashishini agxile kuzinzo, iyantlukwano, kunye nokuthatha inxaxheba koluntu. Intengiso inokudlala indima ebalulekileyo ekuhlengahlengiseni umbono wentlangano engenathemba, enkulu ukuba ibonelele ngezibonelelo kunye nezifundo zokunceda uluntu lwasekhaya. I-Salesforce isandula ukwamkela isikolo salapha e-Indianapolis, ukunikela nge- $ 50,000 kwizixhobo zokubanceda.
Research -Uya phi xa usenza uphando ngeholide yakho elandelayo, ukuthenga kwakho imoto elandelayo, i-inshurensi yakho, okanye ezinye iindleko ezinkulu? Ukuthengisa umxholo onolwazi ukunceda ukufundisa abathengi kunye namashishini kuqhume kule minyaka idlulileyo. Ngelixa injongo kukwakha ukuthembana kunye negunya ngokubonelela ngophando oluyimfuneko, ayisoloko iyinjongo yokugqibela yokuthenga. Amaxesha amaninzi ibonelela ngophando lokuqala okanye lwesibini ekwabelwana ngalo ngokubanzi. Ndihlala ndibona iintengiso malunga nomxholo onokuba ngumdla kubahlobo bam kwaye ndiwuthumele kubo.
Umoya -Ukubaliswa kwamabali kuye kwehla kwiindlela ezininzi zentengiso kuba ayidibanisi nje ngokwasemphefumlweni nabaphulaphuli, ikwavelisiwe ukukhokela umbukeli okanye umfundi ebalini. Abanye banokucinga ngale nto njengokukhohlisa, kodwa ayichazeki kwintengiso esebenzayo evusa imvakalelo.
Ukunyusa -Sebenzisa imvakalelo, intengiso ihlala icenga. UGqirha Robert Cialdini ichaza imigaqo-ntetho yendalo iphela eye yangqinwa ngokwenzululwazi ukweyisela abaphulaphuli - Ukuphindaphinda, ukunqongophala, igunya, ukungqinelana, ukuthanda kunye nokuvumelana.
Ukuba injongo embi yentengiso yayikukukhuthaza intengiso, uninzi alusebenzi kwaphela. Ukuba intengiso ibiyinto embi kwaye inobuqhophololo, sonke besiza kubaleka sisebenza eMcDonalds ukuchitha ixesha nosapho kunye nebhokisi kaMcNuggets! Intengiso iyabiza kwaye, rhoqo kunangoku, kukutshintsha imbono kunye nokwandisa ulwazi. Intengiso, njengezinye iindlela ezininzi zokuthengisa, sisicwangciso sexesha elide esinomngcipheko omncinci onxulumene naso.
Ngaba intengiso isenza sithenge?
Andibuzi maqhinga abhalwe kule infographic, ndibuza umbuzo wenkuthazo. Intengiso ayikho ukukhohlisa okanye ukoyikisa umntu ekuthengeni. Intengiso kufuneka ichukumise iimvakalelo ukuze isebenze ngakumbi- kodwa oko akuthethi ukuba iyakhohlisa… oko kuthetha ukuba kufanelekile. Mhlawumbi ndingaziva ndikhululeke ngakumbi ukuba isihloko besinjalo Intengiso isishukumisela njani ukuba sithenge. Andizange ndibone isibhengezo esandinyanzela ukuba ndicofe, kodwa ndibone ezinye iintengiso ezithe ngqo kwiimfuno zam endizicofileyo.
Endaweni yoko, abathengisi benze iarhente yovavanyo kunye nenyani yeendlela ezahlukeneyo ezijolise ekufumaneni ingqalelo yabathengi. Kwaye nokuba asiqondi ngalo lonke ixesha, ezi zicwangciso zisebenza kakuhle kakhulu.
Nantsi i-infographic endigxeka kuyo Iphepha lewebhuFX.
tags: ezithengisai ntengisointengisoIgunyaUlwazivu melwanongokuvumelanaimvakalelointengiso isenza sithenge njaniisebenza njani intengisoisebenza njani intengisokuthandangcamangoku kholisaukucengafi keleleukubuyekezauphandoxanduvaUkunika amandla ukuthengisaukunqabakufutshaneiphepha lewebhu fx
Shakr: Yenza Iividiyo Zakho Zeshishini Kwi-Intanethi usebenzisa iiTemplate eziMangalisayo
Meyi 10, 2016 kwi-11: 50 AM
Ndicinga ukuba lelona candelo libalulekileyo leentengiso ezikhuthazayo. Ukuba umthengi akanasizathu sokuthenga i-smth sinezinto ezimbini esinokukhetha kuzo. Okanye yenza inkuthazo (umzekelo ogqibeleleyo we-iPhone) okanye ulibale.
Agasti 25, 2017 ngo-1: 11 PM
Kucingwe kakuhle. Xa abantu becinga ngentengiso bahlala belibala ngezinto ezimbalwa. Okokuqala, amashishini amancinci. Amashishini amancinci, ngakumbi ekuqaleni, awanalo "uphawu". Eyona nto bayifunayo kukukwazi ukufikelela kwelona nani liphezulu labantu ngexabiso eliphantsi. Kuphela kusemva kokuba urhwebo lokwenyani lwenzekile apho uphawu lunokusekwa. Eyona nto bayifunayo kukukwazi ukuxelela abantu ukuba iingcango zabo zivulekile kwaye bakulungele ukwenza ushishino.
Into yesibini endicinga ukuba abantu abaninzi bayayilibala kukuba ezentengiso kunye neenkampani zentengiso zibeka amaxabiso azo. Amaxabiso awasetwanga kulungelelwaniso oluthe ngqo kunye noko kufunwa lishishini elincinci. Ndingavuya ukubheja ukuba uninzi lwamaxabiso ezinto ayilelwe ngaphandle komoya omncinci. Ukuba iinkampani zentengiso kunye nabathengisi bayabakhathalela abaxhasi babo, baya kuqinisekisa ukuba intengiso ababonelelayo ilungile kwaye kubaluleke ngakumbi ukuba ishishini ababhengeza kulo lenza imali engakumbi ke lixabisa intengiso.
Kungenxa yokuba indawo yentengiso ifikelela kwisigidi sabantu engesiso nesalathiso sokuba ngabantu abafanelekileyo, ukuba abo bantu bakulungele ukuthenga imveliso okanye inkonzo, okanye nokuba banomdla kwimveliso okanye kwinkonzo. Zonke iindawo ezivelayo ezivela kwiinkampani zentengiso zezi ziyakukuveza kwiXY okanye Z. Azange bathi siza kuqinisekisa ukuba siqhubela abantu emnyango wakho. inomdla kum xa besithi izinto ezinje "akukho ziqinisekiso kwintengiso." Impendulo yam kula mazwi ibisoloko isithi, "sinye isiqinisekiso kwintengiso kwaye leyo kukuba uyakuyithatha ngokupheleleyo imali yam. Nokuba unayo le nto iyandisebenzela okanye akunjalo, uza kuyithatha imali yam. ”